sauvTage: kudzidza kuchengetedza hupenyu pamazera ese
Ipa kudzivirirwa nekukurumidza, kwakakodzera uye kwechigarire kwaari, akabatwa uye nevamwe vanhu kubva kune njodzi dzakatenderedza.
Ita shuwa kufambiswa kweyambiro kune yakanyanya kufanira sevhisi.
Yambiro kana chikonzero chekuziviswa nekutaura ruzivo rwakakodzera
Ziva matanho ekutanga erubatsiro ekutora pamberi pemunhu:
nyajambwa wekuvharirwa kwenzira yekufambisa mhepo;
nyajambwa wekubuda ropa kwakawanda;
munhu ane malaise;
Mumwe nemumwe wedu anogona kunangana nemunhu ari munjodzi.
Iye MOOC “chengeta” (kudzidza kuponesa hupenyu pamazera ese) ine chinangwa chekukupa iwe ruzivo rwakajeka uye rwakajeka pamusoro pezviito zvikuru zvekutora uye yekutanga rubatsiro rwekutanga gestures.
Kana iwe ukatevera ruzivo urwu pamhepo uye nekusimbisa bvunzo, iwe unowana iyo MOOC yekutevera chitupa icho chinokutendera iwe, kana uchida, kutevera "gestural" mubatsiri wega kuti uwane diploma (semuenzaniso PSC1: Kudzivirira uye Rubatsiro rweCivic muChikamu 1).
Munogona mose dzidza kuponesa upenyu : nyorera!
sauvTage: kudzidza kuchengetedza hupenyu pamazera ese January 17th, 2022Tranquillus
VERENGA Kugadzirira kune vese: shinga uye ubudirire
pashureIzvo zvakakosha zvekuita kwevanhu
zvinoteveraCzech mutauro wekutaura kit
Vakakuvadzwa: Nhanganyaya yeVictimology
Mutengesi mubatsiri: kurovedzwa kunokupa mapapiro
Kuverengerwa kweiyo nyanzvi yekuenzana index: pane chero zvirevo zveUES?
Mahara: Nzwisisa uye ubudirire mune yako netlinking kusimudzira SEO yako